May 8, 2020 - Lupyo News
ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေ ပါသူများအတွက်…. ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေ ပါရင် အရာရာ ကြီးပွားပြည့်စုံမယ်…
May 8, 2020 by Lupyo News
ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေ ပါသူများအတွက်…. ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေ ပါရင် အရာရာ ကြီးပွားပြည့်စုံမယ်… (လက်ခဏာပညာနှင့်ဘ၀ကံဆက်စပ်နေပုံ) ဂမ္ဘီရကြက်ခြေ[သို့]နာနာဝိဇ္ဇာသယကြက်ခြေ The Mysterious Cross sign (ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေ ပါသူများအတွက်) ဒီမနက်လဲ နံနက် (၁-၀၀)လောက်မှာနိုးလာပါတယ်။ခါတိုင်းဆို ဘုရားကန်တော့သစ္စာပြုပြီး စာဖတ်၊ပြီးရင် တရားထိုင်ပြီးကရေးခြင်တဲ့စာရေးတင်ပါတယ်။ပြီးရင်ပြန်လှဲပါတယ်။ ဒီမနက်ကတော့ စာမဖတ်အားဘဲ ရေးခြင်ဖော်ပြခြင်နေတဲ့ကိစ္စရပ်လေး တစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ဒါကတော့ ငါးပါးသီလ လုံစွာနေထိုင်နေပေမဲ့ လောကဓံဒါဏ်ကိုခံနေရတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက်ပါ။ မနေ့ကတော့ ဘုရားစာတွေရွတ်ပေမဲ့ ဘ၀မတိုးတက်သူတွေ အနှောင့်အရှက်ခံနေရသူတွေကို ပရိကံလိုအပ်ချက်ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီနေ့ကတော့ ငါးပါးသီလ လုံပါလျက် မပြည့်မစုံဖြစ်နေကြရသော မိတ်တွေအတွက်ပါ။စာတွေလိုက်ဖတ်တဲ့အခါမှာ ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေ ပါရင် အရာရာပြည့်စုံမယ် ကြီးပွားမယ်လို့ ရေးထားတာတွေ ဖတ်ရပါတယ်။ သုတေသနအရတ၀က်မှန်တ၀က်မှားပါတယ်လို့ကျွန်တော် အခိုင်အမာပြောပါမယ်။ဘာကြောင့်ပြောနိုင်သလဲဆိုရင်လက်ခဏာပညာရပ်ကို(၁၃)နှစ်သားကစတင်ရင်းနှီးပြီး ယနေ့အချိန်အထိ အဆက်မပြတ်သုတေသနလုပ်ခဲ့လို့ပါဘဲ။ လက္ခဏာပညာရဲ့အားသာချက်က တွက်ချက်နေစရာဘာပစ္စည်းဘာအထောက်အကူမှမလိုဘဲလက်ကိုယူကြည့်တာနဲ့ … Read more
သောကွာသားသမီးတို့၏ စရိုကျနှငျ့ စိတျနစေိတျထား
သောကွာသားသမီးတို့၏ စရိုကျနှငျ့ စိတျနစေိတျထား သောကြာ သားသမီးတွေဟာ လူ့လောကကို စရောက်ပြီ ဆိုကတည်းက အငိုသန်တယ်။ သွေးအေးအေးနဲ့ စိတ်ကြီး တတ်တယ်။ အနေအေးတဲ့ လူအများစု ဖြစ်ကြပေမဲ့ ကိုယ်ခင်ရတဲ့သူ အရင်းနှီးဆုံး လူတွေနဲ့ စကားပြောရင်တော့ အင်မတန်မှ စကားများတယ်။ လေကြော မပြတ်နိုင်ဘူး။ သူများ အကြောင်းထက် ကိုယ့်အကြောင်းတွေကို ပိုပြီး ပြောပြလေ့ ရှိတယ်။ ရည်မှန်းချက် တစ်ခုကို အကောင်အထည် ဖော်ရင် စိတ်ရှည်တယ်။ သီးခံတယ်။ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ အရာ ကိုယ်မနှစ်သက်သော လူတွေ ဆိုရင်တော့ ဘယ်တော့မှ ဂရုမစိုက် တတ်ဘူး။ ကိုယ်မှန်တယ် လို့ ထင်ရင်လည်း ဘယ်သူပြောပြော ဂရုမစိုက်တတ်တာ သောကြာပါ။ လူမှုရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်ဆံရင် ဖော်ရွေတတ်တာ သောကြာပါ။ … Read more
ဆိုင်ထဲဝင်ပီးပိုက်ဆံခိုးတာမိလို့ ပွဲတွေကြမ်းတာ အမြဲခိုးနေကြသူခိုးတဲ့ မှတ်ထားကြပေါ့(ရုပ်သံ)
ဆိုင်ထဲဝင်ပီးပိုက်ဆံခိုးတာမိလို့ ပွဲတွေကြမ်းတာ အမြဲခိုးနေကြသူခိုးတဲ့ မှတ်ထားကြပေါ့(ရုပ်သံ) ဒီသူခိုးကိုတော့ Ti Ti Thandar အကောင့်ကနေ လိုက်လွှင့်ပီး ဖမ်းတာဖြစ်ပါတယ် ဆိုင်ထဲဝင်ပီးပိုက်ဆံခိုးတာမိလို့ ပွဲတွေကြမ်းတာ အမြဲခိုးနေကြသူခိုးတဲ့ မှတ်ထားကြပေါ့ ခုတော့မကွေး အမှတ်၂စခန်းရောက်သွားပြီ သနားတဲ့သူတွေလိုက်သွားလို့ရပြီ မူရင်းအကောင့်မှာ တင်ထားတာကတော့ အမှတ် ၂ ရဲစခန်း.သို့ ရောက်နေပီ အလွတ်မပေးဘူး ဘယ်လောက်ကုန်ကုန် အမှုဖွင့်ပီ လက်ထိပ်ခတ်ပီ. တမြို့လုံးပတ်ခိုးနေတဲ့ သူခိုးမ. ထွက်ပြေးလို့ နပန်းလုံးလိုက်ရတာ နှလုံးရောဂါတောင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိဘူး ငါ့စောင့်နေတာ ကြာပီ ကဲ အားလုံးလဲ ဂရုစိုက်ကြပေါ့။ ကိုယ့်စီးပွားရေးကို ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်စားနေတာကို သူများဟာအချောင်ယူချင်နေတဲ့သူတွေက အများကြီးပဲ ကပ်ရောဂါကတစ်မျိုး ၊ ဒင်းတို့က တစ်မျိုးပ ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ————————- unicode ဒီသူခိုးကိုတော့ Ti Ti … Read more
အပူချိန်အရမ်းမြင့်တက်နေပါသောကြောင့် ပြည်သူအများပြုလုပ်ရမည့် အချက်များ…
အပူချိန်အရမ်းမြင့်တက်နေပါသောကြောင့် ပြည်သူအများပြုလုပ်ရမည့် အချက်များ… #အပူချိန်အရမ်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ ဒီနေ့ အပူချိန်ဟာ ၄၃ ´C အထိ တက်လာပါပြီ။ဒီအတိုင်း ဆက်တက်နေရင် ၄၅-၄၇´C အထိရောက်နိုင်ပါတယ်။ အပူချိန် တက်နှုန်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင် ယခက်က ၁´C တက်ဖို့ ၁၀ နှစ် ကြာပါတယ်။ အခု ၃ နှစ် အတွင်း ၂`C တက်လာပါတယ်။ အပူချိန် ၁´C တက်လာတိုင်း ပျမ်းမျှအသက် ၂ နှစ် လျော့စေပါတယ်။့ သတိထားကြပါ။ မြန်မာတွေရဲ့ပျမ်းမျှအသက်ဟာကျား ၅၃၊ မ ၅၇ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အပူချိန် ၂´C တက်လာမှုကြောင့်၎ နှစ် ထပ်လျော့သွားနိုင်ပါတယ်။ စိုထိုင်းဆလည်း အရမ်းလျော့နည်းနေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ တော်သေးတယ်လို့ ပြောလို့ ရပေမယ့်အပူဒဏ်ပို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အစားအစာ၊ … Read more
ထူးထူးဆန်းဆန်းတိုက်ဆိုင်မှုပဲလား… အမွှာညီအစ်ကိုရှိတဲ့အိမ်မှာ… နွား အမွှာညီအစ်ကို ထပ်မွေး
ထူးထူးဆန်းဆန်းတိုက်ဆိုင်မှုပဲလား… အမွှာညီအစ်ကိုရှိတဲ့အိမ်မှာ… နွား အမွှာညီအစ်ကို ထပ်မွေး ကံပကြောင်းလွန်းတာလား ထူးဆန်းတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုပဲလား….ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ ပင်းတလဲရွာမှာ နွားပိုင်ရှင်ကယောက်ျားလေး အမွှာမွေးထားပါတယ် နွားပိုင်ရှင်ရဲ့ နွားမကြီးကလည်း နွားထီးလေး၂ကောင် အမွှာမွေးပြန်ပါတယ်…ချစ်စရာလေးတွေပါ သားယောက်ကျားလေးဆိုတာ မိဘတိုင်းလိုချင်ကြတာဖြစ်ပြီး ခုလိုအမွှာလေးရထားတယ်ဆိုတော့ ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုပဲ နွားပိုင်ရှင်တိုင်းကလည်း နွားထီးကိုပဲ မွေးစေချင်ကြတာပါပဲ…ခုတော့ ရှားရှားပါးပါး ထူးထူးခြားခြား နွားထီးအမွှာလေး ရထားတယ်ဆိုတော့ ကံကောင်းလွန်းမက ကောင်းတယ်လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ် Photo Credit: ———————- unicode ထူးထူးဆနြးဆနြးတိုကဆြိုငမြှုပဲလား… အမှာညီအစကြိုရှိတဲ့အိမမြှာ… နှား အမှာညီအစကြို ထပမြှေး ကံပှကောငြးလှနြးတာလား ထူးဆနြးတဲ့ တိုကဆြိုငမြှုပဲလား….ဝမြးတှငြးမှို့နယြ၊ ပငြးတလဲရှာမှာ နှားပိုငရြှငကြယောကြွားလေး အမှာမှေးထားပါတယြ နှားပိုငရြှငရြဲ့ နှားမကှီးကလညြး နှားထီးလေး၂ကောငြ အမှာမှေးပှနပြါတယြ…ခစွစြရာလေးတှပေါ သားယောကကြွားလေးဆိုတာ မိဘတိုငြးလိုခငွကြှတာဖှစပြှီး ခုလိုအမှာလေးရထားတယဆြိုတော့ ကံကောငြးတယလြို့ပှောရမှာဖှစပြါတယြ ဒီလိုပဲ … Read more
ကဆုန်လမွေးဖွားသူများ အတွက်တစ်သက်တာဟောစာတမ်း ကဆုန်လ မွေးဖွားသူများသည်ပင်ကိုယ်စရိုက်အားဖြင့်တည်ကြည်အေးဆေးသူများဖြစ်သည်။ဖြောင့်မတ်မယ်အလွန်သစ္စာရှိတယ်၊ အလွန်သံယောဇဉ်ကြီးမားတတ်ကြတယ် ။အနုပညာပါရမီဓါတ်ခံကြီးမယ် အလွန် ညှို့ဓါတ်အားကောင်းတယ် တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုငြ့် လူအများ၏ချစ်ခင်ကြည်ညိုခြင်းကိုခံရတတ်တယ် ။ ဘေးလူတွေကချစ်ခင်မယ် စန်းပွင့်မယ် အလှအပ၊ အသန့်အပြန့်ကြိုက်တတ်တယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်တတ်မယ်။အထူးသဖြင့် ဘ၀တွင်ကြည်နူးလွမ်းဆွတ်ဖွယ်ရာ အနေအထားများကိုများစွာကြုံခဲ့တတ်ကြပါမည်။ အလွမ်းဓါတ်ခံရှိတယ်လူပေါင်းဆန့်မယ်အကောင်းကြိုက်တတ်တယ် ကောင်းပေ့ဆိုသည့် အသုံးအဆောင်များကိုသာသုံးချင်၏တယ် ငွေအသုံးကြမ်းမယ်။ဘယ်ကိစ္စမဆို ဆန်းစစ်လေ့လာကာ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်ချပြီးမှ စတင်လုပ်ကိုင်တတ်တယ်။နူးညံ့သိမ်မွေ့သလောက် ဒေါသထွက်လာကာ ဘာမှ မမြင်တော့လောက်အောင် ကမူးရှူးထိုးလုပ်တတ်တယ်။ ရဲရင့်တည်ကြည်၍ ထက်မြက်မယ်။နံနက်စော အရုဏ်ဦးအချိန်တွင် အသိညာဏ်အထူးပွင့်တတ်တယ်။ထိုအချိန်တွင် စိတ်ကူးကောင်းတွေ ပေါ်တတ်တယ်ဆုံဖြတ်စရာကိစ္စများဒီအချိန်တွေမှာလုပ်ပါကအမှားအယွင်းမရှိပဲအောင်မြင်မယ်။ ခံစားချက်ပြင်းထန်တတ်တယ် ဘာမဆိုအလေးအနက်ခံစားတတ်တယ်၊ ကိစ္စတစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်ပြီးကနောက်မတွန့်တမ်းလုပ်တတ်တဲ့ဥာဉ်ရှိတယ်စည်းကမ်းတကျစနစ်တကျလုပ်တတ်တယ် ။အချိန်နာရီ၊ကတိသစ္စာကိုအလွန်တန်ဖိုးထားမယ် ဖြောင့်မတ်တယ်။ကတိပျက်က စိတ်ဆိုးတတ်တယ်။ စိတ်ဆိုးခဲသလောက်စိတ်ဆိုးလာပါကလဲ အသားတွေတဆတ်ဆတ်တုန်လာကာမျက်ရည်ပင်ကျလာတတ်၏။ အထူးသဖြင့် မိမိအပေါ်လိမ်လည်လှည့်ဖျားလာက လုံးဝခွင့်မလွှတ်တတ်။ သစ္စာမဲ့ခြင်းကို အလွန်ရွံ့မုန်း၏။စကားပြောဆိုရာတွင် အေးတိအေးစက်နှင့် ချက်ကျကျပြောဆိုတတ်တယ်။စကားလုံးများဖြင့်နာကျင်ခံခက်ဖြစ်အောင် ပြောဆိုနိုင်စွမ်းတယ်။တစ်ခါတစ်ရံ ပြောပေါက်ဆိုပေါက် ကပ်ကပ်ဖဲ့ဖဲ့နိုင်တယ်၊သို့သော် … Read more
ခုထိဘာသာရေးအစှနျးရောကျလြှကျရှိသော ဒေးဗဈလားရုပျသံ ခုလို ကျမ်းမာရေး ပြန်ကောင်းလာချိန်မှာ ဘုရားကိုလည်းချီးမွမ်းပါ။ ကုသပေးတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ကူညီပေးတဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ ပံ့ပိုးပေးတဲ့ အစိုးရ၊ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အလှုရှင်တွေ ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း တခွန်းလေးတော့‌ မပြောသင့်ဘူးလား…..? အခြားခရစ်ယန် ဘာသာတွေကိုတောင် အားနာလှပါပြီ။ ကိုယ့်မှာအမှားရှိခဲ့ရင် ၀န်ခံရဲတဲ့စိတ် ရှိသင့်ပါတယ်။ထိထိရောက်ရောက် အရေးမယူသေးရင် ဘာသာရေး မှိုင်းတိုက်မှုတွေ ကြီးပွားလာမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ကိုယ့်မှာအမှားရှိခဲ့ရင် ၀န်ခံရဲတဲ့စိတ် ရှိသင်ပါတယ်။ အစိုးရကလဲ ခုထိဒီဒေးဗစ်နွားကို ထိရောက်တဲ့ တရားစွဲဆိုမှုတွေ မလုပ်သေးဖူး။ ပြည်သူတွေကလဲ ဒီဒေးဗစ်နွားကို ရွံမုန်းနေကြပါပီ။ မရွံမုန်းတဲ့သူရှိပမလား။ သူ့ကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး ဒုက္ခတွေရောက်။ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံး ကြောက်လန့်တစ်ကြားနဲ့ နေထိုင်နေကြရတယ်။ ကဲဒီဒေးဗစ်ငနွားကို ဘာလုပ်စေချင်ကြလဲ မန့်ခဲ့ပေးကြပါ။ #ပေသီး —————————– unicode ခုလို ကမျြးမာရေး … Read more